Kuzoba khona umbukiso we-Pre-Comrades | Eyethu News
Kuzoba khona umbukiso we-Pre-Comrades
“Kulonyaka uzohlanganisa izingxoxo eziyisihluthulelo.”
UMGUNGUNDLOVU sewuthatha elinye igxathu njengabahleli abalungiselela umbukiso we- pre-comrades yabesifazane, ozokuba ngomhlaka- 20 Meyi 2017 e Golden Horse Casino (White horse function room). Lomcimbi ngowokugubha ukuchuma kwabesifazane kwindima yemfashini, ukudla kanye nobuciko. Kumbukiso wokuqala, lomcimbi waminyaka yonke ngumthombo wogqozi kanye nokweseka oxhumanisa uphinde unike amandla abantu besifazane abafisa ukugijima icomrades noma abanengcebo yolwazi kwezomcintiswano.
Kulonyaka uzohlanganisa izingxoxo eziyisihluthulelo, izingxoxompikiswano, inhlolokhono yomunye ngamunye kanye nezeluleko zongoti abawina ngaphambilini amamedali egolide kanye nongoti bemikhakha. Umbukiso we- pre-Comrades 2017 uzohlanganisa amazwi ahlukahlukene kanye nombono wohla lwabesifazane abasecophelweni eliphezulu kumhlaba webhizinisi, ezobumnandi kanye nezombusazwe.
Abahleli bomcimbi bathe “Sizama ukunika amandla abantu besifazane ukuze bazibandakanye ngokugcwele kwizingxenye ezahlukene zomnotho ngokwakha isigaba esikhuluma ngokuthi zibazungeza kanjani izithiyo zangempela ezimpilweni zabo, njengoba sibobona ukuthi ngokukhuphula izinga lempilo yabesifazane, kusho ukunyusa izinga lempilo womphakathi omuhle.”
Uma bebuzwa ngesiqubulo abahleli bathe “ Besifuna ukwakha isiqubulo esizinze kubu- African ukuze sibonakalise ngamasiko ethu ahlukahlukene kodwa sifuna ukugqugquzela osomabhizinisi abancane ngokwakha imakethe yabo ukuze babonakalise ngamakhono abo.”
Umjaho we-Comrades sewube umcimbi wokugijima emgwaqeni wabasubathi abaningi kanye nabaseki abafanayo ngesikhathi sekhalenda lomjaho ezweni, lomcimbi uzokuba ngukhiye wokweseka ozoqinisa ukusekwa kwabasubathi bamanje kanye nabakusasa kulombono ongagodli.
Uma ufuna olunye ulwazi mayelana nalomcimbi, vakashela ikhasi lethu lenkundla yezokuxhumana ufacebook , Pre Comrades Ladies Extravaganza.
Isewayiso: Isivunguvungu somoya eSouth Coast